विपक्षीलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन भनेर सिकायो मलेसियालेः कप्तान पारस (अन्तरवार्ता) | | Neplays.com
विपक्षीलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन भनेर सिकायो मलेसियालेः कप्तान पारस (अन्तरवार्ता)
By Neplays	 Last updated Jul 16, 2019
नेपालले मलेसियाविरुद्धको टि–२० सिरिज क्लीन स्वीप गरेको छ । कमजोर मानिएको टोली मलेसियालाई हराउँदै नेपालले टि–२० अन्तर्राष्ट्रियमा ऐतिहासिक सफलता हात पा¥यो । पहिलो खेलमा ठूलो अन्तरले मलेसियालाई हराएको नेपालले दोस्रो खेलमा जितका लागि संघर्ष नै गर्नुप¥यो ।
खेलपछि नेप्लेज डट कमसँग बोल्दै कप्तान पारस खड्काले आगामी प्रतियोगिताका बारेमा योजना सुनाए । साथसाथै यो सिरिजले देखाएको नेपाली खेलाडीको प्रदर्शनको पनि समिक्षा गरे । एक सातापछि आईसीसी टि–२० विश्वकपको एसिया छनोट प्रतियोगिता आयोजना हुँदैछ ।
क्लीन स्वीप भयो । कतिको खुसी हुनुहुन्छ ?
अवस्य पनि खुसी छु । आजको खेल निकै प्रतिष्पर्धात्मक थियो । मलेसियाले साँच्चै धेरै राम्रो खेल्यो । हामीले आफ्नो मनोबल गुमाएनौं । पछिल्लो दुई खेलमा सबै खेलाडीले राम्रो खेले । आजको खेलमा शरद राम्रो ब्याटिङ गरे । विनोदको ब्याटिङ अभूतपूर्व थियो ।
बलिङमा पनि सबैले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरे । यो पिच पनि धेरै राम्रो छ । अविनाष बोहराले आफूलाई प्रमाणित गरेको छ । उसलाई जे कामको जिम्मेवारी दिइएको थियो, कुशलतापूर्व निभायो । टिमको प्रदर्शनबाट धेरै खुसी छु ।
सिंगापुरको प्रतियोगिता अगाडी अब एक हप्ता बाँकी छ । दुईवटा म्याच खेल्यौं । त्यसले आत्मविश्वास थपेको छ अनि राम्रो अनुभव पनि पायौं । पाँच–छ महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्दा धेरै फरक हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय खेल्दा र घरेलु खेल्दा धेरै फरक हुन्छ । राम्रो ‘ट्युनअप’ भइरहेको छ । आशा छ यसले निरन्तरता पाउँछ ।
अन्तिम समयमा अविनाषलाई बल दिँदा केही सल्लाह दिनुभएको थियो ?
हामीलाई थाहा थियो, अविनाष के गर्नमा पोख्त छ भनेर । उसको विषेशता के हो र उसले तयारी र अभ्यासमा के गरेको थियो भनेर हामीलाई राम्रोसँग थाहा थियो । तर, तयारी र अभ्यासमा भन्दा खेलको समयमा सबै कुरा फरक हुन्छ । चाहिने बेलामा खेल देखाउन सजिलो हुँदैन ।
आज सबै बलरहरु महँगा परिरहेका थिए । उ आयो र आफ्नो क्षमता देखायो । उसका लागि पनि हामी खुसी छौं । हामी टिमका रुपमा एक अर्कालाई सहयोग गरिरहेका छौं । यस्तै प्रदर्शन जारी राख्न चाहन्छौं । खेलमा सबैभन्दा गाह्रो कुरा भनेको निरन्तरता हो । यस्तै प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिन प्रयास गरिरहेका छौं । अझ राम्रो प्रदर्शन गर्न र टिमलाई सफलता दिलाउन प्रयास गरिरहेका छौं ।
इन्ज्युरीको लामो समयपछि शरद टिममा पर्नु भयो । टिमका लागि शरद कतिको महत्वपूर्ण सदस्य हुनुहुन्छ ?
उहाँको अनुभव सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपाल क्रिकेट यहाँसम्म पुग्नुमा उहाँको ठूलो योगदान छ । आज उहाँले धेरै राम्रो साझेदारी गर्नु भयो । शरदलाई कुन बेला के गर्नुपर्छ भन्ने राम्रोसँग थाहा छ । त्यहो उहाँको अनुभवका कारण हो ।
शरद टिममा हुँदा हाम्रो लागि एउटा ‘सेक्युरिटी’ महसुस हुन्छ । यो सिरिज यहीँ सकिएको छ । हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको जुलाई २३ बाट शुरु हुने प्रतियोगितामा रहनेछ । यस्तै प्रदर्शनलाई कायम राख्ने हो भने त्यहाँ (सिंगापुर) पनि राम्रो नतिजा ल्याउन सक्छौं ।
हार्ड हिटर भनेर चिनिएपनि विनोद भण्डारीले त्यस्तो खेल्न सकेको थिएन । आजको उसको प्रदर्शन चाहीँ कस्तो लाग्यो ?
मेरो विचारमा नेपाल क्रिकेटमा अपेक्षा अलि धेरै छ । एकैचोटी सबैले राम्रो खेलोस भन्ने चाहना छ । हाम्रो तर्फबाट हामी प्रयास गरिरहेका छौं । विनोदले पनि आफ्नो तर्फबाट धेरै मेहनत गरिरहेको छ ।
सँधै ‘पर्फमेन्स’ मात्र हुँदैन । हामी एउटा टिमका रुपमा मजबुत भइरहेका छौं । खेलाडीले गरेको मेहनत, उसले टिममा ल्याउने ‘टिम स्प्रिट’ जस्ता कुराले पनि धेरै प्रभाव पार्छ ।
विनोदले आज जसरी खेल्यो, म धेरै खुसी छु । उसले खेल्नु पर्ने त्यसरी नै हो, यस्तै प्रदर्शनले निरन्तरता पाउँछ भन्ने आशा छ ।
अब एक साताको योजना के छ ?
हामीले यो समयमा आफ्नो क्षमता विकास गर्ने मौका पायौं । योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पनि सुधार ग¥यौं । ब्याटिङमा अझ पनि सुधार गर्न जरुरी छ । बलिङ र फिल्डिङमा पनि सुधार गर्ने ठाउँहरु छन् । सबै पक्षलाई सन्तुलित राख्नुपर्छ ।
ट्वेन्टी–ट्वेन्टी फर्म्याट हो । कुनै पनि टिमले कुनै पनि टिमलाई त्यो दिनमा हराउन सक्छ । मलेसियाले पनि हामीलाई यो कुरा सिकाएको छ की कुनै पनि टिमले कुनै टिमलाई त्यो दिनमा हराउन सक्छ । प्रतियोगिता खेल्न जाँदा कुनै पनि टिमलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन ।
बाँकी एक हप्ता अझ राम्रो तयारी गर्ने, मानसिक र शारिरीक रुपमा अझ बलियो बन्ने, त्यहाँ जाने र राम्रो प्रदर्शन गर्ने योजना छ ।